Ukuthenga indlu yezwe noma indawo yokuhlala, buza ukuthi kunesistimu yendawo yokudoba emgwaqeni kuleyo ndawo, uma kungenjalo, ukuze uthole induduzo ephelele uzodinga ukwakha i-cesspool ( kahle amanzi ). Lokhu akulona nzima, ungakwazi ukuphatha ngokwakho, kodwa kuzodingeka uqonde ama-nuances ezobuchwepheshe bale nqubo, futhi uhambisane nazo zonke izindinganiso zangasese uma ukhetha indawo yokuqoqa imfucuza yasendlini.
Izinhlobo zemithombo yamanzi
Kuzokwakhiwa kahle ngezandla zabo kwakhiwe kahle, sizoqonda izinhlobo zalezi zakhiwo. Kungaba ngezinhlobo ezimbili: noma ngaphandle kwezansi. Inzuzo yomgodi ovalwe uphawu ukuthi amanzi angcolile namanqamu angangeni emhlabathini kuwo, okusho ukuthi akungcolisi imvelo futhi iphephile impilo yabantu.
Ukubalwa komthamo omkhulu
Umuntu ngosuku ubeka ama-150 amalitha wokugijima.
Uma usebenzisa imishini yasendlini, umthamo wokuthuthwa kwamanzi uzokhuphuka ube ngu-500 amalitha.
Uma umndeni unabantu abangu-4, umthamo wamanzi wamanzi nsuku zonke uzoba ngamalitha angama-800.
Ukuqubuzana kwe-cesspool kufanele kube izikhathi ezingu-3 zokulinganisa kwansuku zonke. Kulesi sibonelo, kuzoba ngu-2.4 m, futhi ukujula akufanele kube ngaphezu kuka-3 m, ngoba umshini womshini wokuthutha umkhumbi ulingana nobude obufanayo, futhi uma i-cesspool ijulile, ukuhlanzwa okugcwele nokusebenzayo ngeke kwenzeke.
Uma kwenzeka ukuthi umkhuba wansuku zonke wamanzi ungadluli amamitha ayi-cubic eyodwa, ungakha umthombo ngaphandle kwezansi. Kodwa ukuze amabhaktheriya enhlabathini akwazi ukuhlanza imfucuza, i-cesspool ngezandla zayo kufanele igujwe ukuze itholakala ngaphezu kwetafula elingaphansi komhlaba ngamamitha.
Ezimisweni ze-SNiP, ibanga eliphakathi kwezinto ezisesayithi liyonqunywa:
Kusukela ku-cesspool ukuya endlini kufanele okungenani kube ngamamitha angu-5, futhi ngaphambi kocingo - hhayi ngaphansi kwe-1 m;
Uma inhlabathi ipholile, kusukela emithonjeni yamanzi kuya emthonjeni wamanzi kufanele ibe ngaphezu kwamamitha angama-20, uma isayithi ku-loam lingama-30 m, futhi uma isemhlabathini onesihlabathi, ingaphansi kwe-50 m.
Qaphela ukuthi i-cesspool enezandla zayo ingahlanganiswa ngezinto ezihlukahlukene: izitini, ukhonkolo, imithombo yamapulangwe, amathayi, imigoqo, izindandatho nezinkuni. Ake sicabangele indlela elula kakhulu yokwakhiwa kwayo:
- emva kokunquma umthamo omkhulu nokukhetha indawo, kuyadingeka ukuthi usebenze umhlaba (ukuzitshisa wena noma ngosizo lomgodi osebenzayo).
- i-cesspool yamasongo ekhonksi ihlanganiswe kalula - isisekelo sibekiwe emgodini wekhonkrithi, amasongo phezulu (amathangeni angu 0.9m ukuphakama, 0.7 kuya ku 2.0 m ububanzi, futhi ubungakanani buxhomeke emthamo womfula, izingcezu ezingu-3), khona-ke i-lid Ngomgodi wokuchithwa;
- ngemuva kokuthi kufakwe umthombo onjalo (izinga laso elingenhla kumele libe ngaphezu komhlaba), kufanele lihlanganiswe ne-bitumen ngaphakathi;
- Sixhuma i-cesspool ngepayipi yokudonsa, ukuze phakathi nokuhamba komhlabathi ipayipi ayiphuli - faka i-sealant (kusuka kwendwangu) esikhundleni sokuxhuma kwayo;
- ukuthi i-cesspool enezandla zayo yakhiwa ngokuhambisana namazinga okuhlanzeka, kuyadingeka ukuthi kutholakale umoya wokuphumula, njengoba kukhishwa i-methane ngesikhathi ukuchithwa kwemfucuza, futhi uma kwenzeka ukuqhuma okukhulu, ukuqhuma kungase kudingeke.
Njengoba ubona, kulula kakhulu ukwakha kahle amanzi emasongeni okhonkolo eyedwa. Kodwa ukuze i-cesspool, isifunda nokwakhiwa kwayo okuchazwe kulesi sihloko, ukukhonza isikhathi eside, kubalulekile ukuqonda ama-nuances ekwakhiweni.
I-technoplankton ngezandla zomuntu siqu: imfundo yesinyathelo ngesinyathelo
Igundane isebenza nxazonke kwesikrini: yini okufanele uyenze?
Kanjani ukufunda, futhi ukukwenza ngokushesha ngangokunokwenzeka
Isitifiketi sokuhambisana we Customs Union: ukubhalisa, ukuthathwa, izindleko kanye ebhukwini
Indawo yokudlela "Old Tbilisi", ikheli eKursk, amamenyu, ukubuyekezwa